Ngabe IKaizer Chiefs Ingayishaya ISimba Bese Idlulela Kuma-semi? » Hollywoodbets Sports Blog
Kulesi siqephu sibheke kwiCAF Champions League lapho sinamaqembu amabili aseNingizimu Afrika. IMamelodi Sundowns vs Al Ahly ngenkathi iChiefs izobhekana neSimba.
#HitTheTarget IsiZulu podcast
Kulesi siqephu sibheke kwiCAF Champions League lapho sinamaqembu amabili aseNingizimu Afrika. Mamelodi Sundowns vs Al Ahly ngenkathi iChiefs izobhekana neSimbahttps://t.co/tBYIFuECK2
— Hollywoodbets (@Hollywoodbets) May 5, 2021